Debut သီချင်းဆိုတာ kpop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက် အသက်တမျှအရေးကြီးလှပါတယ်။ ရှေ့ဆက် အာရုံစိုက်ခံရပြီး Fan တွေတိုးလာဖို့ဆွဲဆောင်ရတဲ့အခါမှာ ပွဲဦးထွက်သီချင်းက တကယ့်သော့ချက်ပါပဲ။ Kpop အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့ ပွဲဦးထွက်သီချင်းတွေထဲမှာ အော်ဖော်ပြပါ (၉) ပုဒ်ကတော့ ယနေ့ချိန်ထိတိုင်အောင် လူပြောများပြီး စွဲလန်းနေစေတုန်းပါပဲ။
Girls’ Generation – ‘Into the New World’
၂၀၀၇ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့သီချင်ဖြစ်ပေမဲ့ ယနေ့ခေတ် K-pop အဖွဲ့ပေါင်းများစွာကတောင် cover ပြန်ဆိုနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဂန္တဝင်မြောက်သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ‘Into the New World’ သီချင်းလေးက SNSD အဖွဲ့သားတွေရဲ့ အားကောင်းတဲ့အသံ power အပြင် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အကစွမ်းရည်ကိုပါ မီးမောင်းထိုးပြသထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲဦးထွက်သီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
DAY6 – ‘Congratulations’
DAY6 အဖွဲ့ကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ‘Congratulations’ သီချင်းနဲ့ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်ပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသည်းကွဲသီချင်းလေးကိုမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တုနှိုင်းမဲ့အသံတွေနဲ့ သီဆိုထားတာဖြစ်လို့ နဂိုအသည်းကွဲဖူးသူတိုင်း တမြေ့မြေ့ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
BLACKPINK – ‘BOOMBAYAH’
BLACKPINK အဖွဲ့ကတော့ Kpop လောကကြီးကို ကြီးစိုးဖို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ‘BOOMBAYAH’ သီချင်းနဲ့ ပွဲဦးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အမိုက်စား rap တွေ၊ အားကောင်းတဲ့ အသံ power နဲ့ မာန်ပါတဲ့ ကကွက်တွေကတော့ BLACKPINK ကို လူသိများပြီး Fan တွေ တနေ့တခြားတိုးလာစေခဲ့ပါတယ်။
SHINee – ‘Replay’
R&B ပုံစံလေးနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ ဒီလိုချိုမြိန်တဲ့သီချင်းလေးကို မကြိုက်တဲ့သူ ရှိပါ့မလား? Kpoper မဟုတ်တဲ့သူတွေကတောင် ပွဲဦးထွက်သီချင်းတွေအနက် ဒီသီချင်းလေးက အကောင်းဆုံးဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ SHINee အဖွဲ့ကတော့ အားမာန်ပြည့်ဝနေတဲ့ အသံ၊ ရှုပ်ထွေးဆန်းသစ်တဲ့ ကကွက်တွေနဲ့အတူ Fan တွေကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၈ တုန်းက ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သီချင်းလေးအကြောင်းကို ဒီနေ့ထိ ပြောနေကြတုန်းပါပဲ။
ITZY – ‘DALLA DALLA’
၂၀၁၉ တုန်းကမှ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ ITZY ကတော့ ပွဲဦးထွက်သီချင်း ‘DALLA DALLA’ နဲ့ monster rookies ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသွားခဲ့ပါတယ်။ လိုက်ပြီးကလို့ကောင်းတဲ့ ကကွက်တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ တမူထူးခြားနေတဲ့ အသံတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့က ကိုရီးယားသီချင်းမကြိုက်တဲ့သူတွေကိုတောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
NCT U – ‘The 7th Sense’
၂၀၁၆ တုန်းက NCT U ရဲ့ ပြိုင်ဖက်ကင်း ပွဲဦးထွက်သီချင်းမှာ နစ်မြောသွားဖူးလောက်ပါတယ်။ ကကွက်ဆန်းတွေ၊ ပါးစပ်ထဲစွဲနေတဲ့ စာသားနဲ့သံစဉ်တွေကတော့ နာမည်လေးကြားရုံနဲ့တောင် နားထဲမှာ သီချင်းသံကြားနေရတဲ့အထိပါပဲ။
MAMAMOO – ‘Mr. Ambiguous’
‘Mr. Ambiguous’ သီချင်းနဲ့ ၂၀၁၄ တုန်းက ပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ MAMAMOO ဟာ Kpop လောကရဲ့ vocal queens တွေဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူထားပါတယ်။
SEVENTEEN – ‘Adore U’
၂၀၁၅ တုန်းက SEVENTEEN အဖွဲ့အ‌နေနဲ့ ‘Adore U’ သီချင်းနဲ့ပွဲဦးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ချိုမြိန်တဲ့အသံ၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ သီချင်းစာသားလေးတွေအပြင် အဖွဲ့ဝင်တွေအများကြီးဖြစ်ပေမဲ့ တထပ်တည်းကျပြီး ညီညာနေအောင် ကပြနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေက လူတိုင်းကို နှစ်ခြိုက်စေခဲ့ပါတယ်။
aespa – ‘Black Mamba’
aespa အဖွဲ့ကတော့ 2020 နိုဝင်ဘာလတုန်းကမှ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာပါ။ တရားဝင်ပွဲဦးမထွက်ခင်ကတည်းက ‘Red Velvet ပြီး ၆ နှစ်ကြာခါမှ SM က ပွဲထုတ်မယ့် ပထမဆုံးမိန်းကလေးအဖွဲ့’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ ‘Black Mamba’ သီချင်းကလည်း နားထဲစွဲနေစေတဲ့ မြူးကြွတဲ့တီးလုံးနဲ့ တမူထူးခြားနေတဲ့ MV ကြောင့် နားဆင်သူတွေကြားမှာ တော်တော်ပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Next ခွေးလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ အပြင်ထွက်လာတာတောင် Ferrari F8 Tributo စီးလာတဲ့ ဘောစိ Sehun »
Previous « ၂၀၀၀ ခုနှစ်​တွေမှာ ပျို​မေ​တွေရဲ့ အချစ်ဦး​နေရာကို အပြိုင်လုခဲ့ကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားများ (၁)
JYP ကိုစွန့်ခွာပြီးနောက် ဂီတနယ်ပယ်ကိုပါ အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးတဲ့ GOT7’s Mark
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောရင်း Ha Joon ကိုပဲ တဖွဖွချီးကျူးလို့ မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ Dong Wook
သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ Xiao Zhan ရဲ့ နောက်ထပ် Project အသစ်